Phupha ngeTikiti Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Itikiti sisiqinisekiso esibhaliweyo sokuba imali yesithuthi sikawonkewonke ihlawulwe. Ngale tikiti, ufumana imvume yokunyuka kwaye uhambe. Ngexesha lohambo, umqhubi unokuza kujonga amatikiti abanye abakhweli. Oku kukhusela abakhweli abahamba ngenqwelo moya phakathi kwabahambi.
Itikiti elisemthethweni likwabalulekile kwi el mundo yamaphupha ukuba umphuphi ufuna ukuya apho kuhambo. Ukuba akukho tikiti linjalo, iphupha elo linokujika ngokukhawuleza libe liphupha elibi, kuba woyika isohlwayo. Fumana okunye malunga nomfanekiso wephupha 'itikiti' kwinqaku elilandelayo:
1 Uphawu lwephupha «itikiti» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «itikiti» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «itikiti» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «itikiti» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba ufuna ukusebenzisa ibhasi okanye uloliwe, kufuneka itikiti. Itikiti linokuthengwa ngemali kwihlabathi leewotshi nakwilizwe lamaphupha. Umahluko kukuba imali ephupheni luphawu lwe Ukusebenza kakuhle namandla ephupha. Ke nabani na othenga itikiti ephupheni, unokusebenzisa amandla akhe kwihlabathi lokuvuka kwaye afezekise iinjongo.
Ukuba umphuphi unokuhlawula itikiti, njengoko kubizwa njalo itikiti laseJamani laseJamani, kwiklasi yokuqala, iya kuba igcwele amandla y Ukunxanelwa isenzo. Emva koko uya kusebenza kakuhle ekuvukeni ubomi kwaye ubunzima bakho buya kusombululwa ngaphandle kweengxaki.
Ukuba umphuphi uzama ngokufihlakeleyo ukungena kwiklasi ye-1, nangona engenalo itikiti elichanekileyo, oko kuyabonisa. mahluko kunye neengxaki kwihlabathi lokuvuka. Umphuphi uzenza ngathi ungomnye umntu, kuba enyanisweni unethikithi yeklasi ye-2 kwaye unethemba lokuba uza kukwazi ukuhamba ngaphandle kokubonwa kudidi olungelulo.
Lo mfanekiso uphupha ubonakalisa ukuba naye akaphili ukuya kwinqanaba lakhe kwihlabathi lokuvuka. Uninzi lwexesha, ukhathazwa luloyiko kunye nexhala lokufunyanwa ngumqhubi kwaye emva koko uhlazeke ngabahambi kunye nabo xa kufuneka ubuyele kwiklasi yesibini. Iphupha elinjalo linokujika libe liphupha elibuhlungu ovuka kulo umanzi umbilo.
Uphawu lwephupha «itikiti» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwamaphupha ngokwengqondo ikakhulu kusetyenziswa imali engamaphepha njengophawu lwe Umnqweno wokuhamba kunye Amandla abalulekileyo ndibone ukuphupha. Oku kukwaqulathe amandla ukubumba nokubutshintsha ubomi bakho. Ngetikiti, umntu ophuphayo uhamba ezindleleni ezazingaziwa ngaphambili ezinokuzisa ingxaki kunye nemiqobo. Nangona kunjalo, enkosi kumava akho obomi bangaphambili, ubunzima buya kusonjululwa nalapho.
Ukuthenga ikhadi elinjalo sisenzo esibalulekileyo kumaphupha amaninzi. Ngamanye amaxesha umphuphi uyaqonda ukuba akanamali yaneleyo. Uphando lwamaphupha luyakutolika oku njengophawu lokuba ukwilizwe lokuvuka. Ukunqongophala kwemaliukubumba ubomi bomntu ngokweminqweno yakhe. Kule meko, izicwangciso zakho kuya kufuneka zilinde ithutyana ngaphambi kokuba ziphunyezwe.
Ukuba intlawulo ayongxaki yokulala, izicwangciso zakho ziya kuphumelela ngaphandle kwengxaki. Ukuba iphupha lizingqina lingumphathi wetikiti ngaphandle kwetikiti, likwahlala livusa ubomi ukuba lufune ukulawula ubomi ngaphandle kwenkcitho enkulu kunye nokuncama abanye abantu.
Uphawu lwephupha «itikiti» - ukutolika kokomoya
Imali ebhaliweyo isetyenziswa ekutolikeni amaphupha okomoya njengophawu lwe yokomoya zokuhamba itolikwe ngokuphupha.